Ilaha noocee ayaa iga caawin kara waxtarka dhabta ah ee DoFollow?
Raadinta boggaga internetka ama blogyada kuwaas oo uugu fiicnaan lahaa dib u celinta DoFollow, waxaa laga yaabaa inaad u malaynayso inaad ka faalloonayso blog, boostada martida, liistada iyo liis gareynta ganacsiga, iyo wixii la mid ah. Dabcan, waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah xalalka wanaagsan ee wanaagsan ee isku xirnaanta tayo sare leh. Laakiin mawaaqiftu waa, ma jiraan xalal kama dambeys ah oo noqon lahaa kuwa ugu fiican ee ugu fiican ee dhabarka ah ee DoFollow? Waxaan leeyahay meelo gaar ah oo aad adigu leedahay.
Laakiin ka hor inta aan dib loo eegin mid kastoo ka mid ah, waxaynu ku bilaabaynaa kooban kooban. Ka dib oo dhan, maxaad u haysan kartaa boggaaga ama bloggaaga? Adiga oo ku dadaalaya inaad ku guulaysato Dib-u-celinta DoFollow, nooca faa'iidooyinka aanu si macquul ah uga fileyno iyaga?
Faa'iidooyinka ugu Fiican ee Doolarka Dib-u-Celinta
waxay kordhiyeen Gaadiidka Gaadiidka oo toos loogu talagalay boggaaga ama boggaga bogga;
Awoodda Domain Authority oo si xoog leh u kordhisa waxqabadkaaga mashruuca;
sare u qaadidaada AdSense CPC (qiimaha riix);
kobcinta horumarkaaga socda ee Google PageRank;
hagaajinta darajooyinka raadinta ee hadda jira iyo caddayn daadihin dheeraad ah.
Waxaa jira qiyaaso diyaargarow oo ah meelaha ugu sarreeya ee la filayo in ay ku haboonaan karaan kuwa ugu fiican ee DoFollow Backlinks. Ka mid ah kuwa kale, waxaan jeclaan lahaa in aan qeexo khayraadka internetka ee soo socda sida macquulka ah in la helo bilow kickass ah oo lagu dhisayo isku xirnaanta lahaanshaha DoFollow. Hoos waxaan ku bilaabi doonaa Google Plus, YouTube, LinkedIn, si ay ugu dhammaato Blogger dot com. Haddaba, aynu hoos u degno arrinta! Inaad ka mid noqoto boggaga ugu caansan ee warbaahinta bulshada, Google Plus waa in sidoo kale loo yaqaano barxad bulsheed oo weyn si kor loogu qaado kobcinta dhiirigelinta ah
ee boggaaga ama bloggaaga. I aaminsanahay ama maya, laakiin sababo qaar ka mid ah adeegyadan adeega ah ee caalamiga ah ee raadinta badanaa waxay u muuqdaan kuwo yaryar oo ay hoos u dhigeen kuwo badan. Si kastaba ha ahaatee, waxaan kugula talinayaa in aad tijaabiso xisaabtaada shakhsi ahaaneed - halkaas oo aad ku raaxeysatid tayada dib u eegis tifaftiran oo leh awood sare oo kaliya daqiiqadaha.
Kulankan cajiibka ah ee caanka ah waxaa loo isticmaali karaa si loo helo qaar ka mid ah dib-u-celin dheeraad ah - oo kaliya sameeya kanagaaga iyo buuxinta "ku saabsan". Hase yeeshee, habkan, si kastaba ha ahaatee, waxaad lahaan kartaa oo kaliya BackFollow Backlinks. Si aad u hesho dhab ahaantii qiimo badan oo qiimo leh DoFollow, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso goobaha sare ee kanaalka. Habkaas, guji "bogga la xidhiidha" oo si fudud u dhig URL-kaaga boggaaga. Xasuuso, si aad si sax ah u shaqayso, waa inaad horey u marisaa nidaamka caddaynta ee Horyaalka Google-gaaga marka hore.
Ma aha oo kaliya meel fiican oo lagu abuuro shabakad farsamo iyo xiriir ganacsi, laakiin waa fursad aad u wanaagsan oo aad ku heli kartid dhowr hay'adood oo awood sare ah - waana la muujin karaa dadka isticmaala danaha caalamka oo idil. Ma rabtid inaad seegto, sax? Si loo abuuro bog kale oo la xidhiidha astaamaha DoFollow ee LinkedIn - kaliya abuuro muuqaal shakhsiyeed, ku qaad laba daqiiqo si aad u buuxiso qaybaha lagama maarmaanka u ah, iyo wadaagaan xiriirka tusaale ahaan boostada blogka, dib u eegis sheyga, iwm.Habkaas, malaha suurtagal kasta oo aad wadaagtaan wuxuu noqonayaa mid qiimo leh. Hufan, haa?
Boggan blogging this ma aha caan, laakiin waxaan runtii ku adkeynayaa in aad ka fiiriso xaalad kasta. Halkan waxaa ah sida aad u heli karto backlink leh DoFollow halkaas - uun soo saar bartaada cusub ee taageerada ee Blogger dot com, oo bixiso wakhti yar si aad u buuxiso maqaalka Source . Isku xir bogga internetka ee ganacsiga ama blogka - oo la sameeyo!